आफ्नो परिवार भेट्न १७ हजार किलोमिटर यात्रा गर्ने सानी कुकुर – Koshidaily
access_alarms Koshi daily ६ आश्विन २०७७, मंगलवार ०७:५६	chat_bubble_outline 0	Comments
भनिन्छ- मायाले पालेको कुकुर घरभन्दा जति टाढा पुगे पनि अन्ततः फर्किन्छ। आफ्नो परिवार भेट्टाएरै छोड्छ। यो भनाइ अस्ट्रेलियाको एक कुकुरले सही सावित गरिदिएको छ। अस्ट्रेलियाका एक परिवारले पालेको वेइनर प्रजातिको पिपस्क्वेक (पिप) नामक कुकुरले आफ्नो परिवार भेट्न धेरै नै लामो यात्रा तय गरेकी छ। सानी पोथी कुकुर पिपले अमेरिकादेखि अस्ट्रेलियासम्म पुग्न झन्डै १७ हजार किलोमिटर पार गरेर करिब पाँच महिनापछि आफ्नो परिवार भेटेकी हो।
पिप आफ्नो परिवारबाट कसरी अलग भई त? उसलाई किन यति लामो यात्रा पार गर्नुपर्‍यो? यो सबको कारण हो कोरोना भाइरस। पिपलाई जो र गाइ एल्बेक नामका दम्पत्तिले पालिरहेका थिए। उनीहरूले सन् २०१८ मा सिसिलीको मेसिना सहरमा पिपलाई भेटेका थिए। छोटो समयमै पिप चार जनाको एल्बेक परिवारमा घुलमिल भई र परिवारकै सदस्य भएर बसिरहेकी थिई।
तर अस्ट्रेलियामा घर पालुवा जनावर आयातको कानुन कडा छ। यसकारण एल्बेक परिवारले पिपलाई आफूसँगै घर फर्काउन नमिल्ने भयो। एक त डुंगामा तय भएको यात्रा, जहाजमा गएर टुंगिएको। अर्कोतिर एकदमै कम समय। अनि आफ्नी प्यारी पिपलाई एक्लै बिरानो ठाउँमा कसरी छाड्ने?
घर फर्कने दिन नजिकिँदा उनीहरूले पिपलाई भानुआटुको दक्षिण प्रशान्त टापूबाट लैजाने योजना बनाए। यहाँबाट अस्ट्रेलिया, सिड्नी तुलनात्मक रूपमा छोटो पनि पर्छ। एल्बेक परिवारले सोचेको थियो- अबको ६ हप्तापछि पिपसँग भेट भइहाल्छ। नाका सहज हुनासाथ उसलाई भेट्नेछौं। उसले आफ्नो सानो पुच्छर हल्लाउँदै हामीलाई स्वागत गर्नेछे। अनि हामी डुंगामै उसलाई घर फर्काउनेछौं।
सोचेजस्तो कहाँ हुन्छ र! कोरोना भुसको आगोझैं फैलियो। एल्बेक परिवार चिन्तित भए। उनीहरूका छोरा निन्याउरा हुन लागे। तर विकल्प केही थिएन। जोका अनुसार उनलाई अस्ट्रेलियाको कडा नियमका कारण पिपलाई जहाजबाट घर फर्काउन लामो समय र प्रक्रिया लाग्ने थाहा थियो। ‘मलाई थाहा थियो, पिपलाई आयात गर्नुपर्छ। त्यसपछि उनलाई १० दिन क्वारेन्टाइनमा राख्नुपर्छ,’ जोले सिएनएन ट्राभललाई भनेकी छन्।
अनि उनीहरूले आफ्नो डुंगा र पिपका लागि सुरक्षित ठाउँ खोज्ने निधो गरे। पिपलाई कहाँ छाड्ने भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई खाँदै थियो। उनीहरूको उडानका लागि ४८ घन्टाभन्दा कम समय थियो। यो मार्च २७ को कुरा हो। यही दिन जोले एउटा कार भाडामा लिइन्। पिपलाई लिएर आठ घन्टा गाडी चलाउँदै दक्षिण क्यारोलिनाको एक टापू पुगिन्। त्यहाँ उनका साथी लिन विलियम्स थिइन्। सानी पिपलाई आफूसँगै घर फर्काउन नमिल्ने भएपछि जोले उसको हेरचाह जिम्मा विलियम्सलाई दिइन्।
विलियम्सले पिपलाई केही समय आफूसँग राख्न मानिन्। ‘पिपको धेरै समय डुंगामै बितेको थियो। अब ऊ विलियम्ससँग भैंसी गोठमा बस्दै थिई,’ जोले त्यो बेलाको समय सम्झिँदै भनिन्, ‘त्यो सम्झिँदा मलाई अहिले पनि कस्तो-कस्तो लाग्छ।’
एल्बेक परिवार पिपलाई विलियम्सको जिम्मा दिएर जहाजमार्फत सिड्नी फर्किए। दुर्भाग्यवश, विलियम्ससँग पहिल्यै फार्ममा दुइटा कुकुर थिए। र, धेरै लामो समय पिपलाई राख्न नसक्ने भइन्। विलियम्सले पिपका लागि नयाँ परिवार खोज्न थाालिन्। विज्ञापन गरिन् जसमा तीन जनाले जवाफ दिए।
उत्तर क्यारोलिनाकै हिल्सबरोमा बस्ने एलेन स्टेनवर्ग जवाफ दिनेमध्ये एक हुन्। ‘पिप जोसँग जाने निर्णय गर्छे उसैसँग बस्ने सम्झौता थियो,’ स्टेनवर्गले सिएनएन ट्राभललाई भनेकी छन्, ‘ऊ मसँग रमाई। केही दिनमै मसँग बस्न पनि आई।’
पिप स्टेनवर्गको हेरचाहमा रमाउँदै अमेरिकामा बसिरहेकी थिई। अनि उसको परिवार अस्ट्रेलियामा। जो हरेक दिन बिहान ४ बजेदेखि अमेरिकाबाट अस्ट्रेलियामा कुकुर आयात गर्ने कागजातहरू संकलन तथा बनाउने काममा लाग्थिन्। एल्बेक परिवार पिप र स्टेनवर्गसँग भिडिओ र म्यासेजमार्फत कुराकानी गरिरहन्थे। स्टेनवर्ग पनि दिनकै पिपका फोटा खिच्थिन् र सामाजिक सञ्जालमा राख्थिन्।
भन्छिन्, ‘म सधैं पिपका फोटा सामाजिक सञ्जालमा राख्थेँ। पिपले आफ्ना फ्यान कमाउँदै थिई।’ पिप सामाजिक सञ्जालमा चर्चित भइरहँदा एल्बेक परिवार उसलाई अस्ट्रेलिया फर्काउने कुनै उपाय देखिरहेका थिएनन्। अन्ततः कोरोना महामारी फैलिएसँगै सम्पूर्ण यात्रा प्रतिबन्ध भए। एल्बेक परिवार अमेरिका जाने कुनै सम्भावना नरहेको स्पष्ट भयो। उनीहरू पुग्न नसक्ने भएपछि अब पिप आफैंले एक्लै अस्ट्रेलियाको यात्रा तय गर्नुपर्ने भयो।
जेटपेट्सले पनि पिपलाई अक्ल्यान्डसम्म ल्याउने बतायो। अब अमेरिकामा स्टेनवर्ग उसलाई पठाउने काममा खट्नुपर्ने थियो। तर पिपसँग तीन महिना बिताइसकेपछि स्टेनवर्ग यही समयमा आफ्नो परिवार भेट्न जानुपर्ने भयो। उनले पिपलाई आफ्नी साथी स्टेसी ग्रीनकहाँ छाडिन्। पिप स्टेसीसँग पनि झ्याम्मिएको थियो।
अब जोसँग एउटै उपाय थियो, सामाजिक सञ्जाल। उनले पूर्व तटबाट पश्चिम तटमा यात्रा गर्ने कोही छन् कि भन्दै मद्दत आह्वान गरिन्। जोको यो आह्वानमा ‘द स्पार्की फाउन्डेसन’मा कार्यरत मेलिसा योङले जवाफ फर्काइन्। यो फाउन्डेसन कुकुर बचाउ अभियानमा संलग्न छ। मेलिसा स्वयंसेवी रूपमा पिपलाई लिएर अमेरिकाभर उडान गर्न तत्पर भइन्। यो खबर पाएपछि स्टेसीले भावुक हुँदै पिपलाई मेलिसाको जिम्मा लगाइन्। पिप मेलिसासँग पनि छोटो समयमै घुलमिल भई। माया गर्ने मान्छे पाएपछि सानी पिप दंग परी।
जुलाई २१ मा जेटपेट्सले पिपलाई लस एन्जलसबाट अक्ल्यान्ड जाने जहाजमा राख्यो। यता एल्बेक परिवार उनीहरूको जहाज ट्र्याक गर्दै कुरिरहे। जो भन्छिन्, ‘हामी त्यही उडान हेरिरहेका थियौं। कहाँ आइपुग्यो भन्दै छट्पटेका थियौं।’
त्यो मिलनको क्षण देखेर सबै चकित खाए। जब पिपले जो, गाइ, म्याक्स र क्यामको आवाज सुनी, ऊ बुरूक्क उफ्रिँदै उनीहरूको काखमै पुगी। ‘यति लामो पर्खाइपछि उसलाई फिर्ता पाउनु अचम्मको कुरा थियो। हामी निकै खुसी छौं। उसले हामीलाई भुलिनछे,’ जोले भनेकी छन्।
पिप आएपछि एल्बेकहरूले आफ्नो परिवार पूर्ण भएको महशुस गरे। ‘मलाई थाहा छ यो कुकुर हो। तर हामी उसलाई हाम्रै सदस्य मान्छौं,’ जोले भनेकी छन्, ‘डुंगामा बस्दा सबैले काम गर्नुपर्छ। पिप केही गर्दिन। र पनि उसलाई हाम्रो चालक दलको सदस्य ठान्छौं।’
एल्बेक परिवारले चित्त बुझाइसके, अब डुंगा अस्ट्रेलिया फर्काउन सकिँदैन। उनीहरूले डुंगा बेच्ने निधो गरेका छन्। अहिले उनीहरू स्कटल्यान्ड टापूमै आफ्नो नयाँ जीवनमा रङ भर्न केन्द्रित छन्। उनी केही सकारात्मक हुँदै भन्छिन्, ‘केही वर्षपछि फेरि डुंगा यात्रा गर्नेछौं भन्ने आश छ।’
एल्बेक परिवार पिपको हेरचाह र घरसम्म पुर्‍याउन सहायता गरेका हरेकसँग सम्पर्कमा छन्। पिपसँग तीन महिना बिताएकी स्टेनवर्ग भन्छिन्, ‘हामीले आजीवन साथी बनाएका छौं। पिपलाई मिस गर्छौं भन्दै सामाजिक सञ्जालका पोष्टमा अहिले पनि प्रतिक्रिया आउँछ। यो वास्तवमै निकै रोचक कथा बनेको छ। यो कथाको एक हिस्सा हुन पाउँदा मलाई निकै खुसी लागेको छ।’ पिपको यात्रा कुनै फिल्मको कथाभन्दा कम पनि थिएन।